YPG शृंखला दबाव स्प्रे ड्रायर - चीन Changzhou Daming औषधि उपकरण
WLDH तेर्सो रिबन मिक्सर
EYH शृंखला दुई आयोमी मिक्सर
DSH शृंखला डबल भाड कोन मिक्सर
FL द्रव बिस्तर Granulator
YPG शृंखला दबाव स्प्रे ड्रायर
GFG शृंखला उच्च क्षमता द्रव बिस्तर ड्रायर
वर्णन तरल वा कच्चा माल पेस्ट दबाव वा डायफ्राम पम्प र चाँडै गर्मी विनिमय मार्फत सुखाने देखि सहायता ड्र जो थिचिएको atomizer द्वारा मिनी तरल घटेको मा sprayed छ। (10-90 सेकेन्ड) अन्तिम मा, पाउडर वा सानो कण समाप्त भयो। सुविधाहरू 1 सुखाने गति छिटो र विशेष थर्मल संवेदनशीलता सामाग्री सुखाने लागि उपयुक्त छ। 2. समाप्त उत्पादन एकसमान आकारको बल कण छ। यसको तरलता र विलेयता, घुलनशीलता राम्रो हो। उत्पादन को शुद्धता उच्च र यसको qua छ ...
तरल वा टाँस्न कच्चा माल दबाव वा डायफ्राम पम्प र चाँडै गर्मी विनिमय मार्फत सुखाने देखि सहायता ड्र जो थिचिएको atomizer द्वारा मिनी तरल घटेको मा sprayed छ। (10-90 सेकेन्ड) अन्तिम मा, पाउडर वा सानो कण समाप्त भयो।
1 सुखाने गति छिटो र विशेष थर्मल संवेदनशीलता सामाग्री सुखाने लागि उपयुक्त छ।
2. समाप्त उत्पादन एकसमान आकारको बल कण छ। यसको तरलता र विलेयता, घुलनशीलता राम्रो हो। उत्पादन को शुद्धता उच्च छ र यसको गुणस्तर राम्रो छ।
3. यो स्कोप व्यापक छ लागू गरियो। कच्चा माल को विशेषताहरु अनुसार, यो सुक्खामा तातो हावा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र पनि granulate गर्न सुन्दर हावा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कच्चा माल गर्न बलियो adaptability छ।
4 यसको सञ्चालन सरल र स्थिर छ; यसको नियन्त्रण स्वचालित सञ्चालन महसुस गर्न सरल र सुविधाजनक, सजिलो छ।
evaporated पानी रकम
किलो / घन्टा
समग्र आकार (ँ * एच)
पंप को दबाव
उपखाडी हावा को तापमान
कच्चा माल संग्रह
तापमान 200 कम भन्दा ℃ छ जब मापदण्डहरू व्यावहारिक अवस्था अनुसार गणना गर्नुपर्छ।
बिजुली + बाफ
MPA + किलोवाट
तातो हावा भट्टीमा
Kcal / घन्टा
1 evaporated पानी रकम कच्चा माल र वाष्पीकरण को तापमान को विशेषता सम्बन्धित छ। तालिका मा मापदण्डहरू 150-160 ℃ रूपमा गणना गरिएको छ
वर्तमान बाफ, countercurrent बाफ र उत्पादन को आवश्यकता पूरा गर्न सुकाउने फिर्ता पाउडर:2ग्राहक जस्तै फरक सुकाउने तरिका चयन गर्न सक्छ।
3 प्रवाह चार्ट स्केच बस शो को लागि ग्राहक आवश्यकता अनुसार subassembly टिप्न सक्छ छ।
यो खाद्य पदार्थों, दबाइ, रासायनिक उद्योग, रंग बनानेवाला पदार्थ, सेरामिक्स, जीव रसायन, प्लास्टिक उद्योग र यति मा लागू हुन्छ।
अघिल्लो: XSG शृंखला Rotating फ्लैश ड्रायर
अर्को: YZG, FZG शृंखला वैक्यूम ड्रायर
अपकेंद्र ड्रायर स्प्रे
उच्च गति Centrifuging अनि छिडकाव सुखाने
औद्योगिक स्प्रे सुखाने
उद्योग सुखाने मिसिन रासायनिक स्प्रे ड्रायर लागि
ल्याब स्प्रे ड्रायर
दूध स्प्रे सुखाने मिसिन
दबाव सुखाने छिडकाव
स्प्रे ड्रायर मिसिन
स्प्रे सुखाने मिसिन
प्रकार ड्रायर स्प्रे
Zpg स्टिकी सामाग्री लागि ड्रायर स्प्रे
SZG शृंखला डबल कोन Rotating वैक्यूम ड्रायर
ZKG वैक्यूम rake ड्रायर
सीटी, सीटी-सी हट-हावा परिसंचारी सुखाने ओभन
ओभन ड्रायर SERIES PLG सम्म नित्य प्लेट ड्रायर
एलपीजी शृंखला उच्च गति केन्द्रापसारक स्प्रे ड्रायर